Networking ဆိုတာဘာလဲ | စီးပွားရေးဘဏ္ဍာရေး
Encarni Arcoya | 07/01/2022 15:51 | အဆင့်မြှင့်တင် 07/01/2022 15:53 | စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
အကွာအဝေးပြဿနာမရှိတော့တဲ့ ပိုမိုချိတ်ဆက်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာ ဖောက်သည်တွေနဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ ဘယ်သူနဲ့မဆို အဆက်အသွယ်တွေရနိုင်ပြီး ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းဟာ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေရော အလုပ်လောကအတွက်ပါ ဘုံအလေ့အကျင့်တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်၊ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
တရားဝင်နှင့် အလွတ်သဘော အဖြစ်အပျက်များစွာတွင် ကြားနေရသော ဤစကားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ မရှင်းလင်းသေးပါက သို့မဟုတ် ဤအသုံးအနှုန်းတွင် ပါဝင်သည့်အရာအားလုံးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိသေးပါက၊ သင့်အတွက် ပြင်ဆင်ထားသည့်အရာများကို လေ့လာကြည့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
1 Networking ဆိုတာဘာလဲ
4 Network လုပ်နည်း
ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းကို စွန့်ဦးတီထွင်သူ၏ အဆက်အသွယ်များကွန်ရက် တိုးလာမှုတွင် ပါဝင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆက်အသွယ်ကွန်ရက်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းအကြောင်းပြောနေသော်လည်း တိကျသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာမည်။
ဥပမာတစ်ခုပေးမယ်။ မဟာဘွဲ့ (မျက်နှာချင်းဆိုင် သို့မဟုတ် အွန်လိုင်း) လုပ်ဖို့ သင်စာရင်းသွင်းတယ်လို့ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ အဲဒီထဲမှာ လူတွေပိုများလာပြီး ပုံမှန်အရာက အဖွဲ့တစ်ခုကို ဖန်တီးရတာဖြစ်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ တစ်ဦးချင်းစီက အဲဒီလူတွေရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနဲ့ အဆက်အသွယ်ရလိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့သည် အဆက်အသွယ်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် မဟာဘွဲ့၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့် အခြားသူတစ်ဦးကို အာရုံစိုက်နိုင်ပြီး အချင်းချင်း နားလည်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများဖြစ်သည်။
အခွင့်အလမ်းများဖြစ်လာနိုင်သော လူများအဝိုင်းကို ဖန်တီးလိုက်ခြင်း (အလုပ်ပိုလုပ်ခြင်း၊ အလုပ်ပြောင်းခြင်း စသည်)။ သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ဆင်တူသော်လည်း အလုပ်ကိစ္စအပေါ် အာရုံစိုက်ပါ။ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းဟူသည် အားလုံးနှင့်ဆိုင်သည်။
ရည်ရွယ်ချက်မှာ အလုပ်အကိုင်နှင့် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများရရှိရန်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုပြောထားသော်လည်း အမှန်မှာ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းမှ သင်ရနိုင်သည်ထက် များစွာရှိနေပါသည်။ ဥပမာ:
သင့်လုပ်ငန်း၊ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို လူသိများအောင်၊ တစ်ဖက်လူက သင့်ကို သိအောင်လုပ်ပြီး သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်/သို့မဟုတ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမှတ်တံဆိပ်ကို မြင်နိုင်စွမ်းရှိစေခြင်း။
ကုမ္ပဏီများ၊ ပေးသွင်းသူများနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ဖန်တီးပါ။ဖြန့်ဖြူးသူများ၊ မဟာမိတ်များ၊ အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်များ...
စျေးကွက်အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိပါစေ။သင်လုပ်ဆောင်နေသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခု၏သာမက အခြားဆက်စပ်မှုလည်းရှိနိုင်သည်။
တကယ်တော့ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းသည် လူများ၊ ကုမ္ပဏီများ စသည်တို့ကို ဝိုင်းဖွဲ့ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်တွင် သင်စတင်လိုသည့်အရာကို လူသိရှင်ကြားဖြစ်စေရန် သတ်မှတ်ထားသော အခိုက်အတန့်တွင် ကူညီပေးနိုင်သည်။
ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းဆိုသည်မှာ အမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းသာမဟုတ်၊ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိကြောင်း သင်သိထားသင့်သည်-
အွန်လိုင်း, လူမှုကွန်ရက်များ၊ WhatsApp၊ အီးမေးလ်များကဲ့သို့သော virtual media များမှရရှိသော "အလုပ်" အဆက်အသွယ်များကို လူကိုယ်တိုင်မသိသောကြောင့် ၎င်းသည် အနည်းငယ်အေးစက်သောဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့တွေ့မယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ သင့်မှာ အရင်ကပြောခဲ့တဲ့ မဟာဘွဲ့ရှိပြီး အွန်လိုင်းမှာ သင်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို မတွေ့ရတော့ဘဲ အုပ်စု (ကွန်ရက်၊ WhatsApp ...) ကတစ်ဆင့် သူတို့နဲ့ စကားပြောရုံပါပဲ။
အော့ဖ်လိုင်း၊ သင်တက်ရောက်သည့် လူချင်းတွေ့ဆုံပွဲများ၊ ကွန်ဖရင့်များ၊ အလုပ်ရုံများ၊ သင်တန်းများ၊ ဟောပြောပွဲများ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်၌ပင် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုရနိုင်သည် (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ ခုန်ပျံကျော်လွှားရန် ကူညီပေးနိုင်သော အလုပ်မှလူတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံသောကြောင့်၊ ဥပမာ)။ ယခုအောင်မြင်ရန် သင့်တွင် လူမှုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ရှိရန် လိုအပ်ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်စေရန် မရှက်ပါနှင့်။
ဒါတောင် နှစ်ယောက်လုံး အဆင်ပြေတယ်။ သူတို့တစ်တွေစီမှာ သူ့ရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေရှိတယ်။. နှစ်ခုလုံးကို ပေါင်းစပ်ရန် အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ အွန်လိုင်းတွင် သင့်အား တွေ့ဆုံခွင့် သို့မဟုတ် အဆက်အသွယ်ရှိမည့်သူများထံ ဆက်သွယ်နိုင်စေသောကြောင့်၊ အော့ဖ်လိုင်းတွင် သင့်တွင် သင့်ကိုယ်သင် လူသိများစေရန်နှင့် ကောင်းသော first impression ကို ဖန်တီးရန် အထောက်အကူပစ္စည်းများ ရှိပါမည်။
အရ Networking နဲ့ ပြီးချင်တဲ့ ပန်းတိုင်က ဘာလဲ၊ တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း လုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ သင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို အလွတ်သတင်းထောက်အဖြစ် လူသိရှင်ကြားလုပ်ခြင်းထက် အလုပ်ရှာရန် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်လိုပါက ၎င်းနှင့်မတူပါ။ ထို့ကြောင့် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များထဲမှ များမှာ-
သင့်လုပ်ငန်းကတ်ကို ကမ်းလှမ်းပါ။ လူတစ်ဦးအား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (သင်အွန်လိုင်းမရနိုင်သော) အရာတစ်ခုအဖြစ် သင်ကမ်းလှမ်းသောကြောင့် အော့ဖ်လိုင်းကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းတွင် ၎င်းကို ပို၍အဖြစ်များပါသည်။ အရေးကြီးဆုံးဒေတာကို ၎င်းတွင်ထင်ဟပ်စေသင့်ပြီး ဖြစ်နိုင်ပါက၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့အား မည်သူပေးခဲ့ကြောင်းနှင့် သင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကို မှတ်မိစေရန် ၎င်းတို့သည် သင့်အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး သင့်အတွက် သင့်လျော်မှုရှိစေရန်အတွက်လည်း အဆင်ပြေပါသည်။
ဓာတ်လှေကား ဆောက်ပါ။ Business card နဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ပြောနိုင်သလို အွန်လိုင်းကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုအတွက် အလွန်အဆင်ပြေတဲ့ ဓာတ်လှေကားကွင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် သင်၊ သင့်လုပ်ငန်း၊ ထုတ်ကုန်၊ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် သင်အောင်မြင်လိုသည့်အရာများအကြောင်း2မိနစ်ထက်မပိုသော တင်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပွဲများကိုတက်ရောက်ပါ။. ဤသဘောအရ၊ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖြစ်ရပ်များသည် အွန်လိုင်းမှ လုပ်ဆောင်သည်ထက် ပိုကောင်းသော်လည်း ၎င်းတို့ကို စွန့်ပစ်ရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ပြောမည်မဟုတ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အခုတက်ရောက်ရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ (အွန်လိုင်း၊ ချတ်နှင့် အများအပြားတွင်) သင့်အား လူများက မှတ်မိစေရန်၊ သင်မည်သူဖြစ်သည်ကို သိစေရန် သင်ဆက်စပ်ပေးရမည်။ သင့်ကတ်ကို ခုန်ဝင်ပြီး ကမ်းလှမ်းရန် မကြောက်ပါနှင့်၊ သို့မဟုတ် သင့်အား စိတ်ပါဝင်စားသူများနှင့် စကားပြောဆိုပါက သင်သည် ဖေဖေ့ဖြစ်ကြောင်း သင့်အား ပြောပြနိုင်သော်လည်း၊ သွားရကျိုးနပ်မည်မဟုတ်သောကြောင့် ထောင့်တစ်နေရာတွင်နေနေခြင်းထက် သာ၍ကောင်းသည်။
အဆက်အသွယ်ဗျူဟာတစ်ခု ထူထောင်ပါ။. သင့်ကိုယ်သင် လူသိများပြီး အဆက်အသွယ်ကောင်းများ ပြုလုပ်ထားသည့် ပွဲတစ်ခုကို သင်သွားဖူးသည်ဟု စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ မင်းဘာမှ မလုပ်ဘူး။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဒါက မကြာခဏဆိုသလို ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာဖြစ်ပြီး သင်လုပ်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးအရာက ဒီလူတွေကို ဆက်သွယ်ဖို့ ဗျူဟာတစ်ခု ထူထောင်ဖို့၊ သင်ဘယ်သူလဲဆိုတာကို သတိပေးဖို့၊ အရာတွေကို မှတ်ချက်ပေးပြီး သင့်ကို စည်းလုံးစေမယ့် နှောင်ကြိုးကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေမှာပါ။ မဟုတ်ရင် သူတို့က မင်းကို မေ့သွားမှာမို့လို့ အရမ်းအရေးကြီးတယ်။
သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းသည် ယနေ့ခေတ်တွင် အလွန်အသုံးဝင်သော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့စတင်တည်ထောင်သည့်မြို့ သို့မဟုတ် နိုင်ငံအတွင်း၌သာ မနေတော့ဘဲ နယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ကာ ပိုမိုများပြားလာမည်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရှိရင် သူတို့က ခရီးဝေးသွားနိုင်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » စီးပွားရေးလုပ်ငန်း » Networking ဆိုတာဘာလဲ